Fidinana tany Anjozorobe | Primature
Mahazoarivo, ny 26 Desambra 2019 – Manoloana ny olana mikasika ny fandriampahalemana izay miseho ao amin’ny distrikan’ Anjozorobe, dia nidina tany an-toerana androany ny delegasiona izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Araka izany dia nisy ny fivoriana niarahan’ireto iraka avy amin’ny Filohan’ny Repoblika ireto sy ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny any an-toerana mba hahafahana manadihady ny tena fiavian’ny olana misy ka hitondrana paik’ady entina handaminana sy handrindrana ny famerenana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ao anatin’ny fotoana fohy ary hampaharitra izany any an-toerana.
Nambaran’ny Praiminisitra fa tsy andraikitry ny mpitandro ny filaminana irery ny fampandriana fahalemana fa manana adidy amin’izany ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana, voakasik’izany ny eo anivon’ny fitsarana, ny sefo fokontany, ny lehiben’ny distrika sy ireo tompon’andraikitra amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ka tokony mandray andraikitra avy hatrany izy ireo fa tsy hiandry lalandava ny fitondrana foibe.
Notsiahivin’ny Praiminisitra ihany koa fa laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana, ary velirano nataon’ny Filoham-pirenena ny famerenana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ao anatin’ny fotoana fohy, ary nanaovany jery todika ny ezaka efa natao tao anatin’ny 10 volana nodiavina, tamin’ireny toerana azo lazaina ho faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ireny, toy ny hetsika natao tany Tsaratanana, Ambato Boeny, Maevatanana sy ny any amin’ny faritra Atsimo Andrefana.
Nanentana ireo tompon’andraikitra rehetra ihany koa ny tenany hahasahy hijoro sy hanome vaovao mikasika ireo olon-dratsy, fa tsy hiray tsikombakomba amin’izy ireny mba handravana ireo tambazotra.
Tsara ny manamarika fa hovaina ho kaompania ny borigadin’ny zandarimaria ao amin’ny distrika ary hametrahana ivon-toeram-panofanana manokana ho an’ny tafika eny amin’ny manodidina ho famahana ny olan’ny tsy fandriampahalemana.
Ankoatra izay, fotoana nanararaotan’ny Lehiben’ny governemanta koa io, nifanakalozana teo amin’ny ireo tompon’andraikitra mitantana ny raharaham-panjakana, mikasika ny olana misy izay mety hanohintohina ny fampandehanan’asa amin’ny tokony ho izy. Nanambara ny Praiministra fa mbola maro ireo fanovàna apetraka eo amin’ny sehatry ny fitantanana ny raharaham-panjakana ka « tokony ho modely ny mpiasam-panjakana ary hampiseho finiavana hanavotra ny tanindrazana, tokony hanalavitra ny kolikoly, satria ny tandrevaka sy ny goragora amin’ny fanatanterahana ny asam-panjakana no mbola mampahantra ny firenena hatramin’izao ».
Nitondra ny hetahetany ihany koa ireo tompon’andraiki-panjakana misahana ny fampianarana sy ny fahasalamana any an-toerana. Eo amin’ny sehatry ny fampianarana dia nilaza ny Praiminisitra fa hampitaina any amin’ny Minisitra misahana ny Fanabeazam-pirenena ireo olana misy fa ny vahaolana amin’ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa dia hisy ny fanorenana sekoly vaovao manara-penitra. Toy izany ihany koa ny eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, hanorenana CHRD avokoa ireo distrika rehetra manerana ny Nosy.
Mikasika ny olana misy eo amin’ny famatsiana herinaratra any Anjozorobe dia nanambara ny Praiminisitra fa tokony ho ampy tsara amin’ny fampandehanana ny jiro 24/24 ora ny famatsiana solika ny orinasa Jirama any an-toerana, ary hisy ny fanadihadiana akaiky atao mikasika ny fanodinkodinana sy ny halatra solika ao amin’io orinasa io ka miteraka ny fahatapahan-jiro, izay mila harenina ao anatin’ny fotoana fohy.
← LANONANA FANKALAZANA NY NOELY 2019
Fidinan’ny Praiminisitra tany amin’ny kaomina ambanivohitra Mahazoarivo distrikan’Isandra →
Fitsidihana ny Etamazaoro